Mita Ike | October 2021
Isi > Mita Ike
pụrụ iche ike mita
Pụrụ iche ike mita - irè oru
Kedu mita mita nke kachasị mma? Enyocha mita ike kachasị mmaQuarq DZero DUB Power Meter Spider. Best crank dabeere na ike mita. S-Ọrụ Ike Cranks. Shimano Dura-Ace R9100-P ike mita. FSA Powerbox ike mita. Favero Assioma Duo Pedals. PowerTap Quarq P2 ike mita pedal. Garmin Rally pedal. 4iiii nkenke ike mita.
jiri ụlọ gị gbaa igwe kwụ otu ebe
Ike ụlọ gị na a igwe kwụ otu ebe - depụtara ajụjụ na azịza
Nwere ike iji ịnyịnya ígwè rụọ ụlọ gị? Nope. Ọbụnadị nso. Edgba ọsọ ịnyịnya ígwè n'ụzọ dị mma na-ewe ihe dị ka 100 watts nke ike. Nke ahụ bụ otu ume-kwa oge nke ọkụ bulb 100-watt na-eji.
nkebi ike mita ziri ezi
Okwa ike mita ziri ezi - azịza nye nsogbu
Ime nkeji ike mita agụ ala? Achọrọ m na ọkwa ndị ahụ gụpụtara nke ukwuu karịa Quarq na ọkwa mbọ yiri ya. Ihe ogugu a dikwa ka odi nma, ma ha di ala. Iji maa atụ, mbọ 285 watt na Quarq na-agụ ihe dịka 220 watts na Stage.
ọkụ ọkụ igwe kwụ otu ebe
Akwa ike igwe kwụ otu ebe - ihe ngwọta na
Gịnị bụ ihe kacha ike igwe kwụ otu ebe? Igwe Igwe Igwe Na-egbuke egbuke Nke 2021The Niterider 3600 Pro nke na-enwu na 3600 lumens bụ ugbu a na-enwu ọkụ ọkụ igwe (ọkụ ọkụ ụgbọ ala na-ewepụta ihe dị ka 1500 lumens). Ọ na-ere ihe ruru $ 600. Igwe ọkụ igwe kwụ ọtọ nke na-egbuke egbuke bụ Nitecore BR32 ọkụ 18ED lumen nke ọkụ ọkụ, dị maka $ 130.
ọsụ ụzọ ike mita
Mita ike ọsụ ụzọ - otu esi emezu
Gịnị mere ndị ọsụ ụzọ ike ọsụ ụzọ? Ndị ọsụ ụzọ mara ọkwa taa na ha ga-ebufe igwe mbara igwe ha nke CycloSphere na akụ ndị ọzọ ịgba ịnyịnya ígwè na Shimano. Akụkọ ahụ na-abịa afọ 6 mgbe nnukwu igwe eletrọniki banyere ụwa na-agba ịnyịnya nwere echiche dị egwu - mita ike abụọ nwere akụkụ.
ọnụ ala ike mita
Ọnụ ala ike mita - pragmatic ngwọta
Kedu ihe dị ọnụ ala ike mita? 4iiii Aka ekpe Ogwe aka 4iiii PRECISION na Podium bu uzo kachasi di ike ma di onu ahia karie. Ha ziri ezi, nwee ntụkwasị obi ma dị mfe iji wụnye.
froome ike mmepụta ventoux
Froome power output ventoux - ihe ngwọta nye nsogbu
Ole watts ka Chris Froome mepụtara? 525 watts
igwe ike igwe kwụ otu ebe
Mgba igwe eletrik - esi ekpebi
Ọ bụ mita ike igwe kwụ otu ebe bara uru? Ebe ike mita ike abughi ego, ha kwesiri itinye ego ha. Ezigbo onye nchịkwa nwere ike iji nọmba ike gị iji hụ na ọzụzụ gị na-eduga na ebumnuche ụfọdụ.
4iiii mita ike
4iiii ike mita - kacha ndu
Ndi 4iiii Mita di nma? O zuru oke ma na-agbanwe agbanwe maka ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya iji nweta ozi bara uru nke ga-eme ka ọzụzụ ha dịkwuo mma, ya mere enwere m ike ịkwado ya. Ibu ahụ bụkwa ihe na-adọrọ mmasị, ebe 4iiii bụ mita ike kachasị dị na ahịa. 13. 2017.